ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုသင်တန်း ဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
မဖွံ့ဖြိုးသေးတဲ့နေရာတွေနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာအင်အားနည်းတဲ့ နယ်မြေတွေမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာပြန်လည်ဦးမော့လာစေဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး ဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါ...။ မည်သူမဆို.... ဝေန်ဘန်အကြံပေးနိုင်ပါတယ်...။
တည်နေရာ= သာသနာ့တက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်၊ ကချင်ဆောင်
နောက်ဆုံးလုပ်ဆောင်မှု= Dec 4, 2013
စတင်ရေးသားခဲ့သူ ဥူးပညာ ကော့ကရိတ်. ပြန်လည်ဆွေးနွေးပေးချက် မှာ အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ) Dec 4, 2013. 1 Reply0Likes
နယ်စွန်တွေကို ခရစ်ယာန်သာသနာပြုတွေပဲအရောက်များတယ် အဲ့ဒီနေရာတွေမှာဗုဒ္ဓဘာသာတွေအားနည်းနေတယ် ငယ်ငယ် ဘဝမှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုလူကြီးတွေက ကလေးတွေကိုသိပ်မခေါ်သွားဘူး ညံလို့…ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုသင်တန်း ဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ သို့အဖွဲ့ဝင်ပြီးမှ မှတ်ချက်များကိုရေးသားနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
Pre-ပိစိကွေးလေး သည် အောက်တိုဘာ 17, 2012 က 11:41amတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
သာသနာ ရောင်ဝါနေထက်လင်းစေဖို့ ယဉ်ကျေးမှုသင်တန်း ဖွင့်ကြပါစို့....
မောင်သိန်းထိုက် သည် အောက်တိုဘာ 13, 2012 က 1:58amတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ) သည် အောက်တိုဘာ 11, 2012 က 11:10pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
ထိုင်နေလို့တော့ ဘာမှဖြစ်မလာနိုင်ဘူး...။ သိတဲ့အတိုင်း သူများဘာသာတွေ လက်သွက်နေကြတယ်..ဦးဇင်းတို့ဘာသာက နိုင်ငံတော်ကိုချည်း အားကိုးလို့မရဘူး..။ ကိုယ်ထူကိုယ်ထနဲ့ အကောင်းဆုံးကြိုးစားဖို့ပဲ ကြည့်ရှိတယ်...
အရှင်အာစိဏ္ဏ သည် အောက်တိုဘာ 11, 2012 က 10:46pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
hla moe 24 သည် အောက်တိုဘာ 8, 2012 က 7:09pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
ဒီအဖွဲ့ လေးထဲး ဝင်ခွင့်ရလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဝမ်းသာမဆုံး ဖြစ်ရပါတယ်
အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ) သည် အောက်တိုဘာ 8, 2012 က 6:51pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
ပြောချင်တာကတော့ အများကြီးပဲ။ ဦးဇင်းတို့ တစ်သတ်တော့ သာသနာကစိုးရိမ်စရာမရှိဘူး၊ ဒါပေမယ့် ဒုတိယမျိုးဆက်ကျရင်တော့ ဒီပုံစံအတိုင်းဆက်သွားရင် ရင်လေးစရာဖြစ်နေပြီ။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ဧရာဝတီတိုင်းကို လှည့်လည်ကြည့်တယ်..။ နေရာတော်တော်များများ သူများဆီကို ပါသွားခဲ့တယ်။ ငွေကြေးတစ်ခုတည်းကြောင့်မဟုတ်ဘူး...။ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ပိုင်းရော...ကျေးရွာလူကြီးပိုင်းပါ အားနည်းချက်တွေရှိတာကြောင့် သူများဘက်ကူးသွားကြတာ...။
ဦးဇင်းတို့လည်း တက်နိုင်သလောက် ပြန်လည်ကြိုးစားနေကြပါတယ်..။ သို့သော်လည်း အင်အားဟူသည်မှာ လူမမာတစ်ယောက်မတာထက် လူသန်ငါးယောက်မတာ တာသွားတာခြင်းကွာပါတယ်...။ ဒါကြောင့်မို့ ဒီအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီး ညီညွတ်မှုကို ကမ်းလင့်လိုက်တာပါ.....။